အိုင်ပက် Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ် - ထိုဖန်တီးမှုအနာဂတ်ရဲ့ကြည့်ကောင်းသော - သတင်း Rule
အိုင်ပက် Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ် - ထိုဖန်တီးမှုအနာဂတ်ရဲ့ကြည့်ကောင်းသော
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အိုင်ပက် Pro ကိုပြန်လည်သုံးသပ် - ထိုဖန်တီးမှုအနာဂတ်ရဲ့ကြည့်ကောင်းသော” Toby မောရှေအားဖြင့်ရေးသားခဲ့, တနင်္ဂနွေ 29 နိုဝင်ဘာလအပေါ် Observer များအတွက် 2015 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အိုင်ပက် Pro ကို - Apple ရဲ့ tablet ကိုအကွာအဝေးမှနောက်ဆုံးပေါ် entry ကို၏ပထမဦးဆုံးအထင်အမြင် (£ 679 ကနေ, apple.com) - ၎င်း၏သည် 5.6 -megapixel, 32.8စင်တီမီတာ (12.9တွင်) ဖန်သားပြင်, ဘာမှက Apple ၏အရွယ်အစားနှင့် resolution ကိုယခင်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်မှီနိုငျသော. ဒါဟာရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်. ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် Pro ကို-optimized ဂိမ်းဖွင့်ပစ်ခတ် အဆိုပါအခန်းသုံး (£ 3.99, Fireproof, အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး) ထိုသို့အသက်ရှင်ခြင်းသို့သွားရမည်. အဖြစ်သိသာဗေဒ Charm, ဤကဲ့သို့သော tricksy puzzler နှင့်အတူ, သငျသညျ prod အဖြစ်ဆက်ပြောသည်အသေးစိတ်ကိုမှန်ကန်အကျိုးရှိသည်, တိုးတက်မှုမှပတ်ပတ်လည်ပြီးမှနှင့်ဆွဲပဟေဠိသေတ္တာများ. စီးရီး၏အတိုင်းအတာဟာသူ့ရဲ့ဒုတိယနောက်ဆက်တွဲအတွက်ကျယ်ပြန့်သည်, မျိုးစုံအခန်းပေါင်းစီပဟေဠိ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာမယ့်အစားပုံးကိုမိမိတို့အပေါ်သာအာရုံစိုက်နှင့်အတူ. ဒါဟာကျေနပ်စရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖွင့်နှင့်ဤအသစ်ဟာ့ဒ်ဝဲအပေါ်အကောင်းဆုံးပြသနိုင်ခဲ့သည်.
ဗီဒီယို - Apple ရဲ့ Tim Cook ကအိုင်ပက် Pro ကိုထုတ်ဖော်ပြသ.
သို့သော်, ကအများဆုံးအထင်ကြီးဖို့သေချာပါသောရတဲ့အရာတွေအပြင်ပန်းအောက်ကကွန်ပျူတာ heft င်. မိုဘိုင်းကွန်ပျူတာများ၏ကျယ်ပြန့်အများစုထက်ပိုအစွမ်းထက်, Apple ကဆိုပါတယ်, နှင့် 4K ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နိုင်စွမ်း - စံ HD TV သို့ထက်လေးဆပိုအသေးစိတ် - က iMovie အဓိပ်ပာယျ (ထိုကိရိယာနှင့်အတူအခမဲ့) ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သို့ကြွလာ. အဆိုပါ Pro ကို High-end user များအတွက်တစ်ဦး Laptop ကိုအစားထိုးဖို့မည်မဟုတ် - ကိုကန့်သတ် On-board ကိုမှတ်ဉာဏ်ကမှရှုမြင် - ဒါပေမယ့် YouTube ပေါ်မှာထားရန်အိမ်မှာရုပ်ရှင်၏ fanciest အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါသည်.
အပြည့်အဝအတွက် Microsoft Office ကို suite ကို App Store မှာတဆင့်အခမဲ့ရရှိနိုင် (တစ်ဦး In-app ကိုဝယ်ယူဖိုငျကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပါသည်သော်လည်း), နှင့်ကြီးမားသော touchscreen က, သစ်ကီးဘုတ် connector ကိုနဲ့ပေါင်းစပ်, သူတို့ကိုအကြားတစ်ဦးလေပြေအလုပ်လုပ်စေသည် - သည်အတူဖြစ်ရှိမရှိ Apple ရဲ့ရိုးရှင်းသောလွှတ်ပေးရန် (£ 139) ဒါမှမဟုတ် sturdier, မှ backlit ရာပူဇော်သက္ကာ Logitech (£ 109,99). ဆက်လက်တိုးပွား (£ 4,49, အပ္ပလီကေးရှင်းစတိုး) တစ်ဦးထက်ပိုဖန်တီးမှုထွက်ပေါက်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ယခု၏လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူ ပို. ပင်တိကျကမ်းလှမ်း Apple ကခဲတံ (£ 79). ကိုယ်ကသာအ Pro ကိုနဲ့အလုပ်လုပ်, နှင့်တစ်ဦးနယ်ပယ်အဆိုပြုဖြစ်ဖို့သေချာပါသည်, ဒါပေမယ့်အနုပညာရှင်တွေမှအယူခံဖို့သေချာကြောင်းထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုပါရန်မျက်နှာပြင်အောက်မှာအာရုံခံကိရိယာများနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်. ရုံမှာကြည့်ရှု ဒါဝိဒ်သည် Hockney တစ်လွင်ပြင်ဟောင်းက iPad နှင့်အတူအောင်မြင်အဘယျသို့ - ကနောက်မျိုးဆက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပန်းချီအောင်မြင်ရန်နိုငျရာ၏နယ်နိမိတ်တွန်းအားပေးမြင်ဖို့မအံ့သြပါလိမ့်မယ်.
ပန်းသီး, အပိုဒ်, computing, ဝေဖန်သူများ, ယဉ်ကျေးမှုကို, အားကစားပြိုင်ပွဲ, iPad, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, တက်ဘလက်ကွန်ပျူတာများ, နည်းပညာ, The New ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, အဆိုပါ Observer, Toby မောရှေသည်
← သင့်ရဲ့ခရစ္စမတ်စျေးဝယ်လုပ်နေကြများအတွက်အကောင်းဆုံး app များ၏ဆယ်ပါး ရေမြှုပ်ရွှေအဆိုပါရီးရဲလ်အရာလိုပဲကြည့်သို့သော် Is 98 ရာခိုင်နှုန်းက Air လေကြောင်းလိုင်း [VIDEO] →